War Deg deg: Ciidamada amniga oo gacanta ku dhigay ninkii watay gaari goor dhaw ku qarxay Waddada Afasiyoone!! | kowtharmedia.com
Home WARAR War Deg deg: Ciidamada amniga oo gacanta ku dhigay ninkii watay gaari goor dhaw ku qarxay Waddada Afasiyoone!!
War Deg deg: Ciidamada amniga oo gacanta ku dhigay ninkii watay gaari goor dhaw ku qarxay Waddada Afasiyoone!!
Nov 26, 2016WARAR
Goob uu Madaxweynaha Xasan sheeq ka dhawaa ayaa lala eegtay gaari walxaha qarxo ee ka buuxeen.
Waxaa goordhaw qarax aad u xoogan uu ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan Suuqa loo yaqaan beerta oo kuyaala agagaarka Xerada Ciidanka Cirka Afisiyooni ee Degmada Waabari sida ay noo xaqiijiyeen dad halkaasi ku dhaw.
Ciidamada booliiska iyo kuwa Nabad Sugida ayaa xiray halka uu qaraxu ka dhacay, walina si rasmi ah looma oga halka qaraxan lala damacsanaa, waxaana qaraxan u dhacay xili amaanka si weyn loo adkeenayay.
Laamaha amniga ayaa xaqiijiyay inay gacanta ku dhigeen ninkii watay gaariga la qarxiyay, isaga oo dhaawac ah, kaasi oo iminka ku socoto howlo baaritaanno ah.
Previous PostWarbixin Qoto-dheer Dhismihi Maamulka Jubbaland dhibkii laga soo maray iyo sida ay u dhicisawday maanta waa laba kala dheer! Next PostMadaxweynihii hore ee Cuba Fidel Castro oo Baqtiyay + Tarikhdiisa xun uu Soomaaliya ka galay!!